Kedụ Ka I Si Gosipụta Atụmatụ Azụmaahịa Vidio? | Martech Zone
Ọ bụghị naanị ihe akaebe na-akwado iji vidiyo, ọ bụ sayensị nke vidiyo na-adọrọ uche na mmetụta nke onye na-ekiri ma ọ bụ onye debanyere aha. Anyị na-amanye ndị ahịa anyị niile ịkwaga vidiyo ma na-efesasị ha na saịtị ha niile site na vidiyo na-akọwa ngwaahịa, na ihe nkiri dị mgbagwoju anya, na ịgba akaebe ndị ahịa na vidiyo esi-na-aga n'ihu na-abawanye njikọ na ntụgharị na saịtị ndị ahịa anyị.
Ọ bụghị naanị na vidiyo na-enye mmụba nke 74% na nghọta ndị ọbịa gị banyere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị ma e jiri ya tụnyere ihe osise, kamakwa ọ ga-abụ na ndị ọbịa gị na-azụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị site na 64%.
a infographic si Quicksprout na-ejegharị site na ihe niile ịchọrọ iji kwado itinye ego na azụmaahịa gị na vidiyo. Vidio abughikwa ntinye ego 5, ma obu! Ọ bụghị ihe a na-ahụkarị inwe ọkachamara, vidiyo a mepụtara nke ọma ihe na-erughị $ 10k - ọbụlagodi na ụda olu na ihe nkiri.
Tags: ụgwọ ziri eziVidio Ahịaabaghị uruvideo na emailahịa vidiyonsonaazụ ahịa vidiyo